Oovimba be-EURCHF-Funda ukurhweba
Uqikelelo loNyaka lwe-EURCHF (2022)
I-EURCHF ye-Forecast yonyaka-Ixabiso lizinzisa ngaphezu kweNqanaba leNkxaso ye-1.03160
Uqikelelo lonyaka lwe-EURCHF kukuba ixabiso lizinzise ngaphezu kwenqanaba lenkxaso ye-1.03160. Unyaka wama-2021 ibingunyaka ophawulwe ngowona msebenzi we-bearish kwimakethi ye-EURCHF. Oku ngokuyintloko ngenxa yexabiso elisebenza ngokuhambelana nokubunjwa kwayo kwepateni yentloko kunye namagxa. Ke ngoko, ukuwa okuthe gqolo kwentengiso ukusuka ku-Epreli ka-2021 ukuya kuNovemba ka-2021 yayikukugqibelela ukubunjwa kwentloko namagxa.
Amanqanaba okumelana: 1.11600, 1.14340, 1.19980
Amanqanaba enkxaso: 0.97280, 1.03160, 1.06250
EURCHF Isicwangciso Sexesha elide: Bearish
I-EURCHF yayinokwehla okukhulu kwinqanaba elibalulekileyo le-1.19980 ngoJanuwari 2015. Lo ngumlinganiselo wokulungisa ukungalingani okubangelwa kwimarike ngokunyuka ukusuka ngo-Agasti ukuya kuSeptemba 2011. Ngoko ke, emva kokudipha kwixabiso, i-EURCHF izinzile ngaphezu kwenkxaso ye-1.03160 . Ukusuka apha, inyuka ukuya kuthi ga kwi-1.11600. Ixabiso libuyisela i-1.06250, lenza igxalaba lokuqala ngaphambi kokutyhala phezulu kwi-1.19980.
Ukuchaswa okunamandla kwi-1.19980 kwakhokelela ekuhlahleni okukhulu kwi-1.06250, eyakha iseshoni yentloko. I-EURCHF izama ukunyuka kwakhona, kodwa ubuthathaka bemarike buthintele ukuba idlule i-1.11600. Oku kwakhokelela ekuhlahleni okungaphezulu, ukudala ipateni yentloko kunye namagxa. Ixabiso ngoku liye lawela kwi-1.03160, apho lizinzisa khona. Ipateni yemarike isasebenza kwaye uqikelelo lolwehla ngakumbi. Umnqamlezo omtsha osezantsi we-MA (Moving Average) Cross iyakuqinisekisa oku.
EURCHF iSicwangciso seXesha eliPhakathi: Bullish
I-EURCHF okwangoku izinzile ngaphezu kwenqanaba le-1.03160 kwitshathi yeveki. Oku kunika iinkunzi amandla athile emarikeni. Kwaye kunokubonwa kwindlela i-EFI (i-Elders Force Index) yombane yombane inciphisa ngokukhawuleza ixabiso layo elibi. Ipateni yemarike ihleli ikwi-bearish force nangona, njengoko kucetyisiwe yi-MA Cross esehlayo. Ngenxa yoko, impembelelo ye-bullish yangoku inokukhokelela ekubuyekezweni kwakhona ngaphantsi kwe-1.06250 ngaphambi kokuba ihlehlise i-0.97280.
I-EURCHF Ekugqibeleni iqala iSigaba sokuLungisa ukusuka kwiNqanaba eliPhambili le-1.03270
Uhlalutyo lwexabiso le-EURCHF - nge-11 kaDisemba
I-EURCHF ekugqibeleni iqala isigaba sokulungiswa kwe-bullish ukusuka kwinqanaba eliphambili le-1.03270. Kubekho ulawulo lwe-bearish olutsalwa ixesha elide apho abathengi babebekwe ecaleni ngokupheleleyo, benempembelelo engathandekiyo kwimarike. Nangona kunjalo, ukusukela ekuqaleni kukaDisemba ka-2021, i-EURCHF yaqala ukuphendula kubathengi, kwaye oku kubonakaliswe kukuqhambuka kwentengiso ukusuka kumjelo ohlayo owayihlisela ngaphezulu kwe-5% yokuhla kwexabiso.
Amanqanaba okumelana: 1.04450, 1.05040, 1.09320
Amanqanaba enkxaso: 1.03360, 1.03680, 1.03930
Ixabiso laphuma kwi-channel ehlayo ngomhla we-6 kaDisemba, iphinda ikhuphe inqanaba lexabiso le-1.03710 kunye nephethini ye-bullish engulfment. Nangona kunjalo, imarike ayikwazanga ukukhula ngaphaya komgca wokubonelela nge-1.04520. I-EURCHF iya kuhlala iguquguquka phakathi kwala manqanaba aphambili kude kube sekupheleni konyaka xa ixabiso lehla ngaphantsi kwe-1.03710 kodwa ngokukhawuleza labuyela phezulu. Ngonyaka omtsha, abathengi babexhotyisiwe ngokupheleleyo kwaye ixabiso ekugqibeleni liqala ukubuyiswa, lidlula kumgca wokubonelela nge-1.04520.
I-RSI (i-Relative Strength Index) ibonisa amandla kwinkampu yeenkunzi. Umgca wayo womqondiso unyukile, undanda phezu komda wengingqi ethengisiweyo, usondela kumda othengwe ngokugqithisileyo kwisithuba nje esifutshane sexesha. I-Moving Average Cross iye yaqinisekisa ukunyuka kwi-fortune yemarike ngokubonisa umnqamlezo we-Moving Average.
Kwitshathi yeeyure ze-4, imarike ngoku ibethe ukuchasana kokuqala kwisigaba sayo sokulungisa kwi-1.05100. Ukubuyisela ngoku kuyaqhubeka phambi kokuba ixabiso liqhubele ekuchaseni kwakhona. Isalathisi se-RSI sinomgca wesignali wehla ukusuka kwindawo ethengiwe kakhulu. Imigca ye-MA ibekwe ngaphantsi kwamakhandlela eeyure ze-4 ukunceda ukuqhubeka kwesigaba sokulungiswa kweemarike. I-EURCHF kulindeleke ukuba iphule ukuchasana ngexesha lesibini lokuvavanywa kwindlela eya kwi-1.06070.
tags Itshathi yemihla ngemihla, EURCHF, Forex Analysis Technical, uhlalutyo lwemarike, Ulindelo lweNtengiso, Price Action
Iinkunzi ze-EURCHF zijonge iMarike kodwa ukunyamezela kuyaqhubeka
Uhlalutyo lwexabiso le-EURCHF-Januwari 4
I-EURCHF yenkunzi yenkomo inqumla imarike, kodwa i-bearishness iyaqhubeka. Abathengi ekugqibeleni bamisela i-barricade kwi-1.03710, ekwazi ukunqumla imarike ngokuthanda kwabo. Ke ngoko, ixabiso liqhawuka kumzobo omde wokuhla kwitshaneli ngomhla we-6 kaDisemba kusetyenziswa ipateni ye-bullish engulfment candlestick. Nangona kunjalo, iinkunzi ziye zakwazi ukukhaba ukusuka apha njengoko uxinzelelo lwe-bearish luqhubeka kwimarike. Ke ngoko, ixabiso alikwazanga ukunyuka lidlule i-1.04520 kodwa endaweni yoko lehla phantsi.
EURCHF Amanqanaba aBalulekileyo
Amanqanaba okumelana: 1.04520, 1.06070, 1.09330
Amanqanaba enkxaso: 1.03710, 1.03270, 1.02260
Iibhere ziye zahlala kwikhosi yamahhala kwiimarike ukusuka ekuqaleni kwekota yokugqibela yonyaka 2021. Ngeli xesha, ukuwa kwexabiso kwakudlula umjelo wokuhla kwaye kwaphulwa onke amanqanaba abalulekileyo kunye nemiqobo efunyenwe kwindlela yomgca. Oku kuyaqhubeka de iinkunzi zeenkomo zanda zomelele kwaye zomelezwa kwinqanaba lenkxaso ye-1.03710 yokumisa ukwehla kwixabiso kunye nokuphuma kumjelo wokuhla.
Ngaphandle kokwenza intengiso iphume ekuhleni, i-EURCHF ngoku imiselwe isigaba esingenasiphelo njengoko iibhere zisagcina inqanaba lempembelelo kwintengiso. Ixabiso ngoku livalelwe phakathi kwe-1.04520 njengenkcaso kunye ne-1.03270 njengenkxaso. I-Parabolic SAR (Stop and Reverse) isakhomba kwimarike ye-bearish ubukhulu becala ngokulungelelanisa amachaphaza amaninzi ngaphezu kwamakhandlela emihla ngemihla. I-Oscillator ye-Stochastic ibonisa ukunyuka ngaphezu kwezinga eligqithisiweyo, kodwa imigca ihlala ngokubanzi kwisiqingatha se-bearish.
Ukungaphumeleli ubuncinci kathathu ukugqobhoza ukuchasana kwe-1.04520, intengiso ikwi-downtrend kwakhona, nangona ithambile. Imarike iyaguquguquka ngomjelo ohlayo. Ixabiso ngoku liyehla emva kokuntlitheka kumda ophezulu wejelo kwaye limiselwe ukuhla. Oku kuqinisekiswa yi-Stochastic Oscillator, eye yawela ezantsi ukusuka kwindawo ethengisiweyo.
I-EURCHF ibuthathaka kakhulu njengoko ixabiso libonwa litshona ngokuthe chu
Uhlalutyo lwexabiso le-EURCHF - nge-28 kaDisemba
I-EURCHF ibuthathaka kakhulu njengoko ixabiso libonwa litshona ngokuthe chu. Imakethi ibe yi-bearish ukususela ngo-20 kaSeptemba. Ukuntywila kwimarike kwaqinisekiswa ngakumbi ngumnqamlezo obalaseleyo we-9 kunye ne-21 i-Average Moving. Ixabiso lehla ukusuka phezulu kwendawo ye-1.0840 ukuya kwindawo ye-1.0370, apho ithintele khona kungekudala. Yayijongene nokuchasana okuncinci kwiindawo ezixhasayo kwi-1.0700 kunye ne-1.0530. Imimandla yenkxaso ayizange ikhuseleke kakuhle, ngoko ke kwakungekho ndawo ingako yokunyakaza kwecala ngaphambi kokuba imimandla iphulwe.
Iindawo eziphambili kwi-EURCHF
Iindawo zokuchasana: 1.0840, 1.0600, 1.0450
Indawo yenkxaso: 1.0700, 1.0530, 1.0370
Ukuhla kwe-EURCHF kwenziwe kakuhle; kungoko, umjelo wokuhla ococekileyo ubalasele kwitshati yemihla ngemihla. Inyanga kaDisemba yaqala nge-bearishness de indawo yenkxaso kwi-1.0370 yabethwa. Kwakukho i-bounce kwangoko ukusuka kwindawo, ngokucacileyo ngekhandlela elikhulu le-bullish. Intshukumo nje yosuku olunye ngomhla we-6 kaDisemba yagubungela iintsuku ezintlanu ezidlulileyo. Ikhandlela le-bullish lalisekhona ngaphakathi kwemimandla ye-1.0450 kunye ne-1.0370. Iibhere zikhusele ummandla njengoko beziqhele ukwenza ukusukela ngoSeptemba.
Bobabini ummandla wenkxaso kunye nommandla wokuchasana awufuni ukunika indlela. Oku kubangele intshukumo esecaleni ixesha elide. Imakethi iphakathi kweendawo zayo. Umjelo osezantsi wophulwa. Imarike iye yahlanganiswa ukususela ekuthinteni kwendawo yokuxhasa kwi-1.0370.
Uluhlu lweepesenti zeWilliam kwitshathi yeeyure ezine okwangoku zikwindawo ethengisiweyo njengoko ikhandlela lokugqibela liphumle kwindawo yenkxaso. Indawo yemfuno inokuthi isebenze njengenkxaso kwakhona ukunyusa ixabiso libuyele kwi-1.0450.
I-EURCHF inyanzelekile ukuba idibanise ngaphezu kweNqanaba le-1.03930
Ukuhlaziywa: 25 Disemba 2021
Uhlalutyo lwexabiso le-EURCHF - nge-25 kaDisemba
I-EURCHF iphoqeleka ukuba idibanise ngaphezu kwenqanaba elibalulekileyo le-1.03930. Imarike ekugqibeleni iyonwabela ixesha lokuphumla kwimikhosi ye-bearish emva kokuba ixabiso libethe inqanaba lenkxaso elingenakuthintelwa kwi-1.03930. Ngelixa abathengisi besavutha, ixabiso liye lanyanzeliswa ukuba lingene kwisigaba sokudibanisa. Inqanaba lexabiso le-1.04450 lenza umda wokudibanisa ophezulu kwaye imarike iye yathintelwa ngoku ukuba iphakame ngaphezu kwayo.
Amanqanaba okumelana: 1.09320, 1.04450
Amanqanaba enkxaso: 1.03930, 1.03680
Ixesha elide lolawulo lwe-bearish kwimarike ekugqibeleni lunokufikelela esiphelweni, nokuba kungokwexeshana. Yonke into ebonisa ukuba abathengi baqokelele amandla awoneleyo okunqanda i-bearish tide eyehlela imakethi ngoku. Iitoni zamanqanaba abalulekileyo zaphulwa njengoko ixabiso lehla ngokukhawuleza ukusuka kwi-1.09320 kwiinyanga ezintathu. Nangona kunjalo, kwinqanaba le-1.03930, i-EURCHF iye yanqunyanyiswa kwaye ngoku inyanzeliswa kwisigaba sokudibanisa.
Isibonakaliso sokuqala sokubanjwa kwe-bearish kukuba ixabiso lanyanzeliswa ukuba liphume kwitshaneli yalo ehlayo ngomhla we-6 kaDisemba ngephethini ye-bullish engulfment candlestick. Kungekudala emva koko, iParabolic (Stop and Reverse) yatshintsha amachaphaza ayo ngaphantsi kwamakhandlela emihla ngemihla ukubonisa ukuguqulwa kwisakhiwo esiqhubekayo semarike. I-EFI (i-Elder Force Index) nayo, inomgca wayo wamandla onyukayo ukuze uthinte izinga lokulinganisa okokuqala kwiinyanga ezintathu.
EURHF Imizila yexesha elifutshane: Bullish
Okwangoku, kwitshathi yeeyure ze-4, ixabiso liye labuyela kwi-1.03930 kwintshukumo yayo ye-zigzag. Ngoko ke, kulindeleke ukuba imarike iya kuvuka kwakhona ukusuka apha, kunye nokuya kwindawo yokuqala kwinqanaba lexabiso le-1.04450. I-EFI ibonisa ulungelelwaniso lwemarike njengoko ihambela phambili kwinqanaba elingu-zero.
Iinkunzi ze-EURCHF ziphazamisa ukuhla kweMarike
Uhlalutyo lwexabiso le-EURCHF - nge-14 kaDisemba
Iinkunzi ze-EURCHF zifumana ukubamba imarike ukuphazamisa ukuhamba okuhlayo kwexabiso. Kuyabonakala ukuba njengoko ixabiso lisiya lisiya lisiba nzulu, abathengi baye baba nobuganga bokuphazamisana nokuhamba kwemarike. Ngenxa yoko, ngomhla we-6 kaDisemba, iinkunzi zeenkomo zahamba enye engcono kunexesha lokugqibela ukunyanzela imarike ngaphandle kwesiteshi esihlayo. Nangona isantya sisekunye nabathengisi, i-EURCHF ngoku irhweba ngaphezulu komda ongasentla wetshaneli.
Amanqanaba okumelana: 1.09320, 1.08930
Amanqanaba enkxaso: 1.03680, 1.04450
I-downtrend yangoku kwi-EURCHF yaqala emva kokuba ixabiso lehla ngaphantsi kwe-1.08360 inqanaba elibalulekileyo kwi-30 kaSeptemba. Yayiyintshukumo eyomeleleyo nenamandla yeebhere ezaphule amanqanaba abalulekileyo aliqela ukuze ziziphathe ezantsi. Iinkunzi zeenkomo zazingenakwenza nto, kwaye imiqobo ababeyibeke kumanqanaba athile kuphela yathothisa ukuhla kwexabiso kunokukumisa. Kodwa imiqobo yeenkunzi zenkomo iye yaqatsela njengoko ixabiso lehla ngokunzulu.
Izithintelo ezimbini ezinkulu ezichaphazela ukuwa kwexabiso kwi-1.04450 kwaye yakutshanje kwi-1.03680. Esona sithintelo samva nje sibangele ukuba amakhandlela emihla ngemihla atyhalelwe phezulu aphume kumjelo ohlayo. I-MACD (i-Moving Average Convergence Divergence) ibonisa imivalo ye-histogram ye-bullish nangona imigca ingaphantsi kwinqanaba le-zero, ebonisa ukuba iinkunzi zenkomo zenza iintshukumo kwimarike ye-bearish.
Ngexesha elifutshane, abathengisi bazama ukubuyisela imarike. Ingabonwa ukuba amakhandlela iiyure ezi-4 ekuqaleni wenyuka phezu MA ixesha 10 (Moving Average) ziye zawa phantsi kwakhona, nangona amakhandlela zonke zihlala phezu umjelo parallel. Umgca we-MACD unokubonwa uhla njengoko abathengisi bezama ukubuyisela imarike. Siye sabona intshukumo esezantsi ngakumbi phambi kokuba abathengi bakhuphe iqhinga elibuyisela umva ukunyusa ixabiso.
I-EURCHF yeNyanga yeNkxaso ayanelanga ukumisa ukuhla kweXabiso ukuya kwiMinyaka emithandathu ephantsi
Uhlalutyo lwe-EURCHF - ngoNovemba 23
Inkxaso yenyanga ye-EURCHF ayanelanga ukumisa ukuwa kwexabiso okuqhubekayo. Kwakukho ukuqokelela okwethutyana kwexabiso ngaphezu kwenkxaso yenyanga ye-1.05400, kodwa ke ixabiso lifumene indlela engaphantsi kwenqanaba. Inkxaso eyongezelelweyo kwi-1.05040 ayikwazanga ukumisa i-downslide kwi-EURCHF nokuba. Imarike ngoku ithintele phantsi kwe-1.04450, inqanaba lokugqibela lafika kwi-21st kaJulayi 2015. Ngoko ke, i-EURCHF ngoku iye yawela kwi-6 yeminyaka ephantsi.
Amanqanaba okumelana: 1.08930, 1.09320, 1.09890
Amanqanaba enkxaso: 1.08360, 1.07010, 1.05400
I-EURCHF igqobhoze kumanqanaba aphambili aliqela kunye neendawo ezintathu eziphambili zenyanga ezibaluleke kakhulu ukuwela kwinqanaba layo langoku lamaxabiso. Emva kokukhatywa kwi-1.09320, ixabiso lawela kwinqanaba elibalulekileyo le-1.08360, apho iibhere zibanjwe iintsuku ezisixhenxe zokurhweba. Emva koko, ixabiso lawa, liqhekeza amanqanaba abalulekileyo ukufikelela kwi-1.07010, apho kwakukho elinye ixesha lokuqokelela ngaphambi kokuba imarike ifike kwi-1.05400. Kuthathe iintsuku ezininzi, kodwa i-EURCHF yehla nangakumbi.
Kwi-1.04450, imarike ngoku ifikelele kwindawo ephantsi kakhulu kwiminyaka eyi-6. Ixabiso lithengiswe ngokugqithisileyo njengoko kubonisiwe kwi-RSI (i-Relative Strength Index) isalathisi, umgca wayo wesignali ujikeleze kumda ogqithisiweyo ukususela ekuqaleni kukaNovemba. Singathanda ukuba iinkunzi zenkomo ziphume emthunzini ngenjongo yokuphembelela imarike, kwaye kukho iimpawu zaloo nto. Amakhandlela amathathu amvanje ngamakhandlela ajika umva, kubandakanywa isiphatho sekhandlela somntu onikezelayo kunye nesiphatho sesikhandlela esisontayo.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, nangona iseyi-bearish ubukhulu becala, imarike iphendula kwiimpembelelo ze-bullish. Amakhandlela angabonwa ukuba anyuke ngaphezu komgca ophakathi kwendlela ehlayo. Kwakhona, isalathisi se-RSI sinyuke ngokukhawuleza ukuchukumisa ngaphantsi komgca wesiqingatha sendlela njengoko iinkunzi zeenkomo ziqhubeka zityhala imarike. Ukugqwesa okukhulu kuya kuba ukuba iinkunzi zeenkomo zingatyhala ngaphezu kwenqanaba eliphambili le-1.05040, ziya kukwazi ukubamba kwaye ziqhubele phezulu ngaphezu kwe-1.05400 kwixesha elifutshane.
I-EURCHF Iqhekeza Ngaphantsi kweNkxaso yeSibini eNxibelelekileyo njengoko ixabiso liqhubeka nokuwa
Uhlalutyo lwexabiso le-EURCHF - ngoNovemba 17
I-EURCHF iphula ngaphantsi kwenqanaba lesibini elibalulekileyo lenkxaso njengoko iibhere zihlala zityhala ixabiso lihle. I-1.05400 yinqanaba elibalulekileyo lokuxhasa elisetyenziswa yinkunzi yenkomo ukuzama ukumisa i-bearishness yokuthengisa. Ixabiso lehle laya kumgangatho ngomhla wokuqala kaNovemba kwaye i-EURCHF yaqala ukudibanisa njengoko iinkunzi zeenkomo kunye neebhere ziphazamiseka ukuba zibe zezentengiso. Oku kwaqhubeka kwiintsuku ze-10 zokurhweba ngaphambi kokuba imarike iphule ngaphantsi kwezinga.
EURCHF iNdawo engundoqo
Amanqanaba okumelana: 1.05400, 1.06580, 1.09320
Amanqanaba enkxaso: 1.05040, 1.04750, 1.04450
Imarike iqalise ukuhla ngenxa yokuba ixabiso lihlulekile ukugcina ukubamba ngaphezu kwezinga elibalulekileyo le-1.08360. Imarike yehla ngokukhululekileyo ukufikelela kwi-1.07010 ngomhla we-6 ka-Oktobha. Eli nqanaba lexabiso ngummandla wokuqala obalulekileyo osetyenziswa ziinkunzi ukuvavanya ukusombulula abathengisi, abathi ekugqibeleni babonise ukuqina njengoko kuqhawuka ixabiso elingaphantsi kwenqanaba. Ukusuka apho, kwabakho enye into eyehlayo kwimarike.
Ukuhla kweemarike kwehla kwinqanaba lesibini elibalulekileyo le-1.05400, kwaye kwenzeka into efanayo njengoko ixabiso liqokelelwe ngaphezu kwezinga. Ngomhla we-15 kaNovemba, i-EURCHF iphula ngezantsi kwakhona ukuze iqhubeke ne-bearish trend. I-EFI (i-Elder Force Index) ibonisa indlela iibhere eziye zalawula ngayo imarike ukususela ngo-29th kaSeptemba xa ixabiso lihlulekile ukubamba ngaphezu kwe-1.08360. Umgca wayo wamandla uhleli kwixabiso elibi ukususela ngoko.
Ukuqokelela kwenzeka ngaphaya kwendawo ebaluleke kakhulu ye-1.05400. Ukuba wophule ngaphantsi kwenqanaba, ixabiso liye larhoxa ukuze liphinde livavanye inqanaba ngaphambi kokuba imarike iphose phambili. I-MACD (i-Moving Average Convergence Divergence) igxininisa ukutsalwa okuphezulu okufihlakeleyo kwimarike kwaye kuye kwakho ukuwela phezulu kwimigca. Nangona kunjalo, ixabiso lilindeleke ukuba liqhubeke liwa, kunye ne-1.04450 ukujoyina iligi.
I-EURCHF Downtrend Ifika kwiNqanaba eliPhambili leNkxaso
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURCHF-Okthobha 9
I-EURCHF downtrend iza kumisa emva kokubetha inqanaba elinamandla lenkxaso ye-1.05470. Kwaxelwa kwangaphambili ukuba imarike iya kuhla ngamandla, kwaye kukho ukuwa kwamahhala kwiiveki ezi-2 ezidlulileyo apho imarike iphazamise i-3.6% ngexesha lexesha. Nangona kunjalo, i-downtrend ngoku iza kuma ngokukhawuleza njengoko i-EURCHF ibetha indawo yenkxaso ye-1.05470 eyomeleleyo.
Amanqanaba obonelelo: 1.09890, 1.07390, 1.05890
Amanqanaba eMfuno: 1.05470, 1.05040, 1.04750
Kwitshathi yemihla ngemihla, imarike inokubonwa isenza intshukumo enyukayo ngokuzinzileyo emva kokusuka kwinqanaba lemfuno ye-1.05470 ngoMeyi 18th, 2020. Ukwehla okuphezulu okuhambelanayo kunokubonwa kwimarike. Oku kwaqhubeka kwada kwafikelela kwinqanaba lokugqibela eliphantsi ngaphezulu kwenqanaba lexabiso le-1.09890, apho iinzame ze-bullish zaqala ukuncipha. Ngenxa yoko, imali yokuhlawula amatyala yaqala ukwehla. I-downtrend yayihamba kancinci ekuqaleni de ixabiso lifikelele kwinqanaba elibalulekileyo le-1.08200, apho i-EURCHF yadibana nokuchasana kwe-bearish.
Emva kokuqokelelwa ixeshana kwi-1.08200, ukungabikho kwemali kuye kwanyanzeliswa ukuba hle. Nangona kunjalo, abathengi babambe imarike kwi-1.07230 kwaye bajijisana nemarike ngasemva ukuya kwi-1.09320, ngaphezu kwexesha le-MA le-50 (i-Average Moving). Ngeli xesha, i-bearish momentum eninzi yayigciniwe kwaye yakhululwa. Oku kubangele ukuhla kwexabiso apho ixabiso liye ladlula kwixesha le-MA le-50 kwaye lehla ngaphezu kwe-3.6% kwiiveki nje ze-2. Ngoku imarike iza kumisa kwi-1.05470.
I-EURCHF okwangoku ihleli ngokuqinileyo ngaphezulu kwe-1.05470 kwixesha elifutshane. Nangona kunjalo, uxinzelelo lwe-bearish luyaqhubeka kwaye imarike iye yanyanzeliswa ukuba idityaniswe kunye ne-1.05890 esebenza njengochaso kwimarike. I-RSI (I-Relative Strength Index) kwitshathi yeeyure ze-4 inyuke ngaphezu kwe-50 yenqanaba eliphakathi, elibonisa impendulo enhle kwiinkunzi zeenkomo. Abathengi bajonge ukusebenzisa udibaniso lwangoku ukuphembelela imarike ngokuthanda kwabo, kwaye baya kujonga ukuqhuba imakethi ukuya kuthi ga kwi-1.06580.